&#039;प्रदेश सरकारबाट वितरित प्रेस पास लिएकालाई सिंहदरबार प्रवेश नदिए के हुन्छ ?&#039; - Jhilko
'प्रदेश सरकारबाट वितरित प्रेस पास लिएकालाई सिंहदरबार प्रवेश नदिए के हुन्छ ?'
नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवीको पक्षमा आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । महासंघका श्रमजीवी हित प्रवद्र्धन समितिका संयोजक रामप्रसाद दाहाल निरन्तर श्रमजीवीको पक्षमा लड्दै आएका छन् । र, यो आन्दोलनले पनि सार्थक निश्कर्ष निकाल्नेमा उनी ढुक्क छन् ।
सरकारले श्रमजीवीको पक्षमा ठूला लगानीका मिडियालाई ‘पे रोल’ अनिवार्य गर्ने नीति बनायो । पे रोलविना पत्रकार परिचयपत्र नदिन मातहतको निकायलाई निर्देशन दियो । तर, प्रदेश ३ ले प्रेस पास धमाधम दिन थालेको छ । यसले श्रमजीवी पत्रकारको मुद्धा त तुहिदैंन ?
यस्ता धेरै प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिएका छन् महासंघका सचिव रामप्रसाद दाहालले ।
नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । ढिलै गरे पनि सकारात्मक कदम चालेको छ । आन्दोलन सार्थक निश्कर्षमा पुग्ला ?
श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा महासंघ विगतदेखि निरन्तर आन्दोलित छ, जुन दिन महासंघ यो आन्दोलनबाट विचलित हुन्छ त्यो दिन सिंगो संगठन प्रश्नैप्रश्नले घेरिनेछ । अहिले गर्न लागिएको आन्दोलन त्यसैको शृङ्खला हो । महासंघको श्रमजीवी हित प्रवद्र्धन समितिकोे यही साउन १६ गते बसेको बैठकले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनलगायतका मुद्दामा कोही कसैसँग सम्झौता नगर्ने प्रण गरेको छ । अहिले जुन मुद्दामा आन्दोलन हुँदैछ त्यो ठीक समयमा भएको छ । ढिलो यस कारण पनि भएको छैन कि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को दबरन्दी विवरण बुझाउने समय नै साउन १५ सम्म थियो । त्यसको भोलिपल्टै हामीले यो विषयमा आन्दोलनको पहल लिएका छौ । महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, महासचिव रमेश विष्ट तथा उपत्यका, प्रतिष्ठान र एशोसिएट प्रदेश समितिका अध्यक्षहरु समेत सहभागी भएको बैठकका निर्णय स्वतः महासंघको सिंगो निर्णय हो । अब उहाँहरुकै नेतृत्वमा हामी आन्दोलनमा जादैछौ । समितिले सूचना तथा प्रसारण विभागसँग दरबन्दी विवरण बुझाउने र नबुझाउने मिडिया हाउसको नाम सार्वजनिक गर्न दबाब दिँदैछ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : प्रदेश सरकारबाट वितरित प्रेस पास लिएकालाई सिंहदरबार प्रवेश नदिए के हुन्छ ?
जहाँसम्म संघीय सरकारले प्रेस पास रोक्यो भनिएको छ, त्यो गलत हो । जसले कानुनी प्रावधान पूरा गरेका छन् तिनले प्रेस पास पाइरहेका छन् । पत्रकारलाई तलब दिने सुनिश्चिता गर अनि प्रेस पास दिन्छु भनेको न हो । तसर्थ मिडिया हाउसले खुरुक्क न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्दै पत्रकारहरुले प्रेस पास पाउने वातावरण बनाउनु पर्दछ ।
हामीले न्यूनतम पारिश्रमिक लागू नगर्ने ध्येयले दरबन्दी विवरण नबुझाउने र श्रमजीवी पत्रकारलाई प्रेस पासबाट समेत बञ्चित गर्ने मिडिया हाउस विरुद्ध जाने भनेका हौ । र, त्यसका लागि अलि गम्भीर खाले तयारी गर्नु पर्ने भएकाले केन्द्रीय समितिले संघ/संगठनसँग रायसुझाव लिएर आन्दोलनको तालिका सार्वजनिक गर्दैछ केही दिनमै । यसपटकको आन्दोलन श्रमजीवीको पक्षमा परिणाममुखी हुनेमा ढुक्क रहनुस । आफ्नो अधिकारको रक्षार्थ हुने आन्दोलनमा सामेल हुन म आमश्रमजीवी पत्रकारलाई आह्वान गर्न चाहन्छु ।
ठूला लगानीका मिडियाले सरकारले लागू गर्न लागेको श्रमजीवीको मुद्धा कार्यान्वयन गर्न हिच्किचाइरहेको देखियो । मिडियाको विपक्षमा महासंघले आन्दोलन गर्न सक्ला ?
हो, २०५१ सालमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन आएदेखि नै यसको विपक्षमा मालिकहरु प्रत्यक्ष रुपमा र श्रमजीवीको नाममा राजनीति गर्नेहरु पनि अप्रत्यक्ष रुपमा लागेको धेरैको गुनासो छ । अहिले नेपाल पत्रकार महासंघको मागकै आधारमा सरकारले वृद्धि गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने मुद्दा बहसमा ल्याइएको छ । मलाई लाग्छ, लोकतन्त्र, सुशासन र कानुनी राजको वकालत गर्नुपर्ने मिडियाले आफैलाई लाज हुने गरी श्रमजीवीको पक्षमा आएका कानुन र निर्णयहरु उल्लङ्घन गर्न सुहाउँदैन । श्रमजीवीको आवाज दबाउन खोज्ने मिडियाले समाजमा आफैैलाई बदनाम गरिरहेको भान हुन्छ ।
सबै प्रदेश सरकारहरु बसेर प्रेस पास लगायतका विषयमा पर्याप्त छलफल गरी सरोकारवालाहरुको सहमतिमा मात्र यस्तो कदम उठाउनु उचित होला । अन्यथा प्रदेश नम्बर ३ सरकारबाट वितरित प्रेस पासले सिंहदरबार प्रवेश दिन्न भनेर संघीय सरकारले भन्यो भने के हुन्छ ? अन्य प्रदेशले मान्यता दिएनन् भने के हुन्छ ? यी प्रश्नको उत्तर नखोजी अगाडि नजानु नै जायज होला ।
मजदुर आन्दोलनका नेता प्रदेशको विभागीय मन्त्री भएको बेलामा श्रमजीवी पत्रकारलाई के कस्तो असर पार्छ भनेर सामान्य छलफल समेत नगरी किन यस्तो हतारमा कदम उठाउनु भयो त्यो चाहिँ बुझ्नै सकिएन ।
अहिले हरेक मिडियामा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरुको मन आन्दोलित छ । त्यो प्रकट हुन नसकेकोमात्र हो । महासंघ आन्दोलित भएपछि उनीहरु जोडिने विश्वास लिन सकिन्छ । यस अर्थमा महासंघको आन्दोलन विफल हुने कल्पनै नगरौं । कानुन पालना गर भनिएको आन्दोलन कहिल्यै असफल हुँदैन । र, ठूलठूला शक्तिको विरुद्ध लडेर विजय हासिल गर्दै आएको महासंघ केही मिडिया हाउस विरुद्ध जान सक्दैन भनेर संगठनको अवमूल्यन गरिरहनुको तुक म देख्दिन । विगतमा पनि मिडिया हाउस विरुद्ध आन्दोलन भएका छन्, महासंघ सफल भएको छ । हाम्रो आन्दोलन मिडिया हाउसको विरुद्ध या समर्थनमा होइन, श्रमजीवी अधिकार प्राप्तिको हो ।
एकातिर महासंघले सरकारले संसदमा ल्याएको विधेयकका कतिपय प्रावधानको विपक्षमा पनि आन्दोलन गरेको छ । यसमा ठूला लगानीकर्ताको संगठन मिडिया सोसाइटीसँग कार्यगत एकता गरेर सरकारको विपक्षमा आन्दोलनमा गइरहेको बेलामा फेरि महासंघ सोसाइटीको विरुद्ध पनि जानसक्ला र ?
हामीले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रस्तावित कानुन विरुद्ध आवाज उठाएका हौ । आन्दोलित भएका हौ । हाम्रो पछिल्ला आन्दोलनमा मिडिया सोसाइटीसँग कही कतै कार्यगत एकता भएको, नरहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु । र, अहिले हामीले श्रमजीवीको अधिकारको पक्षमा गर्न लागेको आन्दोलन कुनै संगठन विरुद्ध होइन । तसर्थ कानुनमा संरक्षित अधिकार देऊ भनेर जहाँ र जसको विरुद्ध पनि महासंघ आन्दोलनमा जान सक्छ । तपाईको पहिलो प्रश्नले नै जवाफ दिइसकेको छ ।
मिडियाको ‘पे रोल’ को विषय उठाएर संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रेस पास रोकिरहेको बेलामा प्रदेश ३ ले बाँडेको छ । यसलाई महासंघले कसरी लिएको छ ?
संविधानले नै संघीय कानुन र नीतिसँग बाझिने कानुन प्रदेश सरकारले बनाउन पाउँदैन भनेर बोल्छ । अहिले प्रदेश ३ सरकारले उठाएको कदम केन्द्रीय सरकारको नीति तथा कानुनसँग मेल खान्छ ? के यो कदम श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा छ ? अनि यस्तो गम्भीर विषयमा निर्णय लिंदा सरोकारवाला पक्षसँग किन पर्याप्त छलफल गरिएन ? कि कतैबाट प्रभावित भएर हतारमा यो कदम चालिएको हो ? यी प्रश्नको जवाफ प्रदेश नं ३ को सरकारले दिनुपर्छ ।
त्यसो भए प्रदेश ३ ले बाँडेको प्रेस पासको वैधानिकता के हुन्छ ?
यसमा मेरो पनि प्रश्न छ । यसको कानुनी परीक्षण हुन सक्छ । तर, श्रमजीवीको अधिकारमा आँच पाउने काम प्रदेश सरकारले गर्नु हुँदैन ।
तसर्थ संघ, सबै प्रदेश सरकारहरु बसेर प्रेस पास लगायतका विषयमा पर्याप्त छलफल गरी सरोकारवालाहरुको सहमतिमा मात्र यस्तो कदम उठाउनु उचित होला । अन्यथा प्रदेश नम्बर ३ सरकारबाट वितरित प्रेस पासले सिंहदरबार प्रवेश दिन्न भनेर संघीय सरकारले भन्यो भने के हुन्छ ? अन्य प्रदेशले मान्यता दिएनन् भने के हुन्छ ? यी प्रश्नको उत्तर नखोजी अगाडि नजानु नै जायज होला ।
वन विधेयक २०७५ जनमुखी हुन्छः वनमन्त्री वस्नेत